Somaliland: Sheekh Dirir Ayaa Sheegay Inaan Diinta Islaamka Mooyee, Ciddii Diin Kale Sheegata Ilaahayna Ka Aqbalayn, Ummaduna Xaaraan ku Tahay Inay Aqbasho - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Sheekh Dirir Ayaa Sheegay Inaan Diinta Islaamka Mooyee, Ciddii Diin Kale...
Diinta keliya ee xaqa ah Ilaahayna ogol yahay waa islaamka Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa ka digay halista gaalnimada, iyo hal-ku-dhigyada in diimahu dhamaantood sammada ka soo degeen, oo hadaan laga hortegin keenaysa in si loo wada arko islaamka iyo gaalnimada, ama wanaaga iyo xumaanta.
Khudabadii Jimcaha manta (shalay) oo Sheekh Maxamed, mowduucaa si balaadhan u baaamiyey ayuu ku bilaabay:
“Waxaan doonayaa inaan ka digno laba arrimood oo dad muslimiin ahi xitaa xayeysiiyaan, mid waa waxa loo yaqaan ‘midaynta diimaha’ oo la yidhaahodwaxba ma kala soocna ee dhamaantood waa samaawi, markaa saaxiibtinimo haka dhexeyso, taasoo ay ka dhalanayso in dadka diimaha kale haysta loo aqoonsado inay xaq tahay.
Sheekh Maxamed ayaa shaaca ka qaaday in diin aan islaamka ahayn oo xaq ah aanay caalamka ka jirin, waxaanu yidhi,
“Waxa muhiim ah in qof walba ogaado inaan diinta islaamka mooyee, diin kaloo xaq ahi aanay caalamka ka jirin, nooc ay doonaysaba ha ahaatee. Diinta keliya ee Ilaahay ogol yahay ee xaq ah waa islaamka. Sida Ilaahay ugu cadeeyey aayado badan oo quraanka ka mid ah, sida suuratul alcimraan, “Diinta dhabta/xaqa ah waa islaamka” yuhuudiyada iyo nasraaniyada midna maaha.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in kitaabka quraanku nasakhay dhamaan kutubtii ka horeysay ee soo degay, waxaanu yidhi,
“Diinta islaamku waxay inoo caddeysay in kitaanka quraanku nasakhay dhamaan kutubtii ka horeysay, wax lala yaabana maahee, kutubtii reer Banu-Israa’iilna qaar ka horeeyey ayey nasakheen. Sida ilaahay ayaado ugu sheegay in ‘kitaabka quraanku yahay mid nasakhaya kuwii ka horeeyey’.
Kutubtii hore ee baybalka iyo towraad, labaduba waa baadil, uma tixgelinayno inay yihiin raacitaankooda xaq, ayuu sheegay Sheekh Maxamed, isagoo ka hadlayana waxuu yidhi.
“Kutubtii hore ama waxa casrigan loo yaqaan Baybal iyo Towraad, labaduba waa baadil, umana tixgelinayno raacitaankooda xaq. Ilaahay ayaa quraanka inooga waramay sida loo dhalanrogay ee wadaadadoodii u bedeleen, wax Ilaahay inooga waramayna cid kale ka dhegeysan mayno. Sida Ilaahay aayad ugu sheegay “halaag waxa leh kuwa kitaabkii lagu soo dejiyey intay masaxeen gacmahooda ku qoraya.
Cid kasta oo ka hortimaada diinta islaamka, yuhuda iyo nasaaro magacoodu waxuu noqonayaa gaal, lagalama gabanayo, ayuu sheegay Sheekh Maxamed oo aaminsan nahay, waxaanu yidhi,
“Cid kasta oo diinta islaamka ka hortimaada, yuhuud, nasaaro iyo kuwa asnaamta caabuda waa gaalo, sida Ilaahay quraanka ugu yidhi, ‘Waxaad tidhaahdaa gaalooy’, side ayeynu ugala gabanaa inaynu magacaa ugu yeedhno, waynu ugu yeedhaynaa gaalo.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay kuwa ku doodaya in diimahu dhamaan samada ka yimaadeen oo qof walba tuu doono raacayo waa baadil, waxaanu yidhi,
“Kuwa ku doodaya in diimahu dhamaantood samadda ka yimaadeen oo qof walba tuu doono raacayo waa baadil, sida Ilaahay quraanka inoogu sheegay, “Waxay jecel yihiin inaad u gaalowdaan siday iyaguba u gaaloobeen, oo isku mid noqotaan.”
Hadii aragtida in diimahu dhamanatood sammada ka yimaadeen, aan laga hortegin waxa imanaya halis ayuu sheegay Sheekh Maxamed isagoo ka hadlanaya waxuu yidhi,
“hadii aragtida in diimahu isku mid yihiin aan laga hortegin waxa meesha ka baxaya kala duwanaashaha xaqa islaamka iyo baadilka gaalnimada, waxa meesha ka baxaya wanaagii (waxii islaamku keenay) iyo xumaan (waxii gaalnimadu keentay). Lasoco qeybta labaad.